Ukuphupha ngokuzibophelela Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Xa abantu ababini beganana, oko kuthetha ukuba bayathembisana. Kude kube ngawo-1960, uthethathethwano emva kwesicelo sendoda lwaluyimfuneko kwaye luyinxalenye yomtshato. Ixesha lokuzibandakanya lalisetyenziswa ngelo xesha ukwenza iimeko zoqoqosho zokuhlala kunye ngaphambi komtshato. Apha kwafuneka ukuba ugcwalise ibhulukhwe yomtshakazi kwaye ugqibezele amalungiselelo omyeni. Kwaye ekugqibeleni, indlela yokuziphatha phakathi kwamaqabane ngaphandle kokulalanisa yayingaphandle kombuzo.
Namhlanje, izibini akusafuneki zinikezele kwiindibano zentlalo. Uthethathethwano kunye nesithembiso esihamba nomtshato lukhetho olukhululekileyo kubo bobabini abatshati kwaye ngokubanzi aluphenduli kwiimfuno zemali. Izibini ezininzi zinomdla kuphela kwirhafu rhoqo emva komtshato. Nangona kunjalo, ukubandakanyeka ngokusemthethweni kubonisa abo bakungqongileyo ukuba abantu ababini bayathandana apha kwaye benza izicwangciso ezinzulu ngekamva kunye.
Kwixesha elidlulileyo, ixesha lokuzibandakanya lalithathwa njengelithuba lokulingwa ngaphambi komtshato kwaye nanamhlanje luvavanyo kwezinye izibini ukuba uthando lwabo luyakwazi ukumelana nobomi bemihla ngemihla kunye nobunzima. Sithanda ukucacisa kwisicatshulwa esilandelayo ukuba ukuzibophelela kuthetha ntoni njengomfanekiso wephupha:
1 Uphawu lwephupha «ukuzibophelela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuzibophelela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuzibophelela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuzibophelela» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umntu uphupha ngoku ukuzibophelela, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kuhlalutyo lwamaphupha kwahlula ukuba ngubani kanye lo uphuphayo. Ukuzibandakanya ephupheni kuhlala kufanekisela umnqweno wobophelelo, uthando y calor.
Ukuba uphupha lo mfanekiso wephupha njengomntu ongatshatanga, umele umnqweno wosapho kunye nomtshato. Ukuba iphupha litshatile, unokulangazelela ukudityaniswa koluntu. Ukutolikwa kwabantu abadala kuphando lwamaphupha ukubona umfanekiso "wokuzibandakanya" njengephupha elibi, njengoko ingxabano neqabane isenokuba isondele.
Ukuba utshatile kwaye uphupha ngokuzibandakanya nomntu wasemzini, unokufumana okuhle kwaye ubahlobo abasenyongweni ndijonge phambili. Kungenxa yokuba luvuyo oluhle kuphela olusimema ukuba sibhiyozele ukuzibophelela kwakho.
Ukuba unomlingane wakho ojongene namava akho ephupha, akunakukhathazeka malunga nolonwabo kunye. Ingxabano enokubakho nomntu omthandayo iya kusonjululwa kungekudala, kwaye oku kukwazi ukusombulula iingxaki kunye kuya kubasondeza abatshatileyo.
Uphawu lwephupha «ukuzibophelela» - ukutolikwa kwengqondo
Kananjalo ngokwembono yengqondo, umfanekiso wephupha "ukuzibophelela" umele umnqweno onzulu wephupha. fusion, Imvisiswano y iyunithi. Nabantu abazinikeleyo banokuphupha ngokuzibophelela.
Kunokubakho ingxaki kubudlelwane okanye awufumani uthando ongathanda komnye umntu. Iimvakalelo zihlala zibonakala emaphupheni ethu, kodwa asithethi ngazo ebomini bokwenyani. Nokuba kungenxa yeentloni, uloyiko, okanye kuba ungaziqapheli.
Ukuba umntu uphule ukubandakanyeka ephupheni, oku kunokuba luphawu Ukungaqiniseki Yiba ngamaphupha. Ungakufumana kunzima ukwenza izigqibo ebomini bakho bokuvuka ngenxa yokoyika iziphumo zoku. Kodwa kusenokwenzeka ukuba sele ubangele ukuba umba usilele ngezenzo zokungakhathali kwaye nangoku ungazi ungcungcuthekiswa zizityholo zetyala.
Uphawu lwephupha «ukuzibophelela» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa ngokomoya, ukuzibophelela ephupheni kufanekisela into yokudibanisa kunye nomnqweno wokuphupha. Ukubandakanywa onke amalungu engqondo nawomoya.